Guddoomiye Ku Xigeenada 1aad iyo 2aad ee Baarlamaanka Puntland oo La Doortay.
Friday January 04, 2019 - 18:29:29 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Waxaa la soo gabagabeeyay doorashada Guddoonka Baarlamaanka Putnland iyadoo la doortay guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen.
Xildhibaanada Golaha wakiilada Maamulka Puntland ayaa guddoomiyaha Baarlamaanka u doortay Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo halka ay gudoomiye ku xigeen koowaad u doorteen Abuukaate Cabdicasiis Cabdulaahi Cismaan,guddoomiye ku xigeenka 2aadna Ismaciil maxamed Warsame .
Abuukaate Cabdicasiis Cabdulaahi ayaa waxa uu ku guuleystey codad gaaraya 38 cod iyadoo uu abuukaatuhu uu ka mid yahay xildhibaanada ku cusub Baarlamaanka Puntland.
Sidoo kale waxaa guddoomiye labaad loo doortay Ismaaciil Maxamed Warsame kadib markii uu helay codad gaaraya 45 cod.
Marka la eego doorashadii maanta ee golah wakiilada ayaa ka duwanayd doorashooyinkii horey uga dhacay Puntland waxaana gudoonka la doortay ay noqdeen badi kuwo sharci dajiyaal kuna cusub saaxada siyaasadda marka laga reebo gudoomiyaha golaha wakiilada oo muddo ka mid ahaa xildhibaanada golaha wakiilada Baarlamaanka Puntland.
Si kastaba doorashadan maanta dhacday ayaa isbedel weyn ku keeni karta saadaashada doorashada madaxweynaha oo la filayo in iyana ay dhacdo 4 maalmood kadib oo ku beegan 8-bisha January 2019.
8-da bishan ayaa lagu wadaa in ay dhacdo doorashada Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland iyadoo ay sheegeen inay musharixiin yihiin inkabadan 20 musharax oo ah musharaxiintii ugu badnaa ee maamulka Puntland soo mara.
20/06/2019 - 12:57:52